HTMLDOC: ovao ny HTML ho PDF amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
HTMLDOC: ovao ny HTML ho PDF amin'ny GNU / Linux anao
Ny endrika HTML dia azo ovaina ho rakitra PDF raha tianao. Afaka manao izany amin'ny fomba samihafa ianao. Ny iray amin'izy ireo dia mametraka amin'ny fizarana GNU / Linux anao ny fampiharana HTMLDOC. Izy io dia fampiharana misy GUI tsotra, na dia azonao atao aza ny mampiasa azy amin'ny tsipika baiko. Izy io dia sehatra iampitana sy loharano misokatra, azonao atao koa ny mahita antsipiriany misimisy ao tranokala ofisialy. Raha misintona ny tarball miaraka amina kaody loharano azonao andrafetana dia azonao aleha tranokala GitHub anao.
Azonao atao ihany koa ny mahazo izany any amin'ny toerana fitahirizam-bokatra malaza indrindra, hahafahanao mampiasa ny manager package ho an'ny fametrahana tsotra avy amin'ny binary. Raha vantany vao tafapetraka dia azonao atao ny manomboka mampiasa azy. Tadidio fa tsy tranonkala ho PDF, fa a Antontan-taratasy HTML mankany amin'ny PDF. Ary raha te hanao ny fiovam-po ianao dia ho mora toy ny mihazakazaka ity baiko manaraka ity:
Raha ataonao avy amin'ny GUI izany dia tsotra sy tsotra kokoa. Zavatra iray hafa no tadiavinao ovay ny pejin-tranonkala ho PDF. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe mitsidika an'ity bilaogy ity ianao ary tianao ny sasany amin'ireo lahatsorany. Te hitazona azy eo an-toerana ao anaty PDF ianao hijerena azy ivelan'ny Internet raha tsy manana fifandraisana foana ianao na te hitazona kopia fotsiny sao voafafa ao amin'ny bilaogy. Ho an'izay dia misy fitaovana an-tserasera hafa tena tsara toa an'io:
Adikao fotsiny ny URL an'ny lahatsoratra na pejy tianao, apetaho ao anaty boaty ary tsindrio ny bokotra hamoronana ilay PDF azonao sintonina maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana. Ny isa tokana dia ny isan'ny antontan-taratasy azonao ovaina ao anatin'ny iray volana ... Ankoatran'io fitaovana io dia misy safidy hafa hanaovana an'io izay lazaiko io fa io no tiako indrindra amin'ny fahatsorany sy ny fahombiazany. Na dia tsy maintsy lazaiko aza, misy pejy web sasany tsy afaka mamadika azy ireo, fa izy ireo no vitsy an'isa ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » HTMLDOC: ovao ny HTML ho PDF amin'ny GNU / Linux anao
Ubuntu Touch OTA-10 dia efa navotsotra
Google Chrome OS 76: manatsara ny fanohanan'ny kaonty marobe amin'ny Chromebooks